Pireziidantiin Turk lolli Tigraay akka dhabbatu Araarsuuf yaada Dhiyeessaniruu? | Addis Zeybe - Digital Newspaper
Pireziidantiin Turk lolli Tigraay akka dhabbatu Araarsuuf yaada Dhiyeessaniruu?
Hagos Gebreamlak, Naol Getachew•August 24, 2021
Al Jaziiraan Ingiliffaa Hagayya 13, 2013 ALI, barruu mata dureen isaa ‘Erdooğaan lolli Tigraay Itoopjiyaa akka dhabbatu Araarsuuf yaada Dhiyeessan’ jadhu fuula Fesbuukii isaa irratti qoodee ture.
Barruun kuniis barruu dabalata “Pirezidantiin Turk Ministira Mumee Itoophiyaa argataan. Waali-galtee ykn Marii ifa bahe garuu hin jiru.” Jadhu waliin Fesbuukii irratti qoodamee. Postichi kuniis fayadamtootan yeroo 437 ol kan qoodame fi ri’akshinii 3,000 ol kan argatedha.
Haqcheck qabiyyee toora intarnetichaa hubatee barruun Pirezidantiin Turk Rasiip Tayib Erdoogaan waraana Tigraay ItoopHiyaa dhaabuuf jaarsa ta’uuf akkaa yaalaan waan ibsu akka hin jirree mirkaneesse. Possti Fesbuuki fi barruu toora-intarneticha jeduu wal-qunnamtii kijibaa wan jiruuf HaqCheck poosti Fesbuukii kana MATA-DUREE DOGOGGORSISAA jadhee madaale.
MM Itoophiyaa Hagayya 12, 2013 ALI gara Turk Ankaaraa dow’annaa hojii guyyaa tokkoo godhanii turaan. Isaaniis Waa'ee naanoo fi dhimmaa biyya lamaanii marii’atanii turaan.
Erdoogaan waraana Tigraay Itoophiyaa nageenyaan akka hiikamuu kan deegaraan ta’uu isaanii dubbatan.
Pireziidantichis waldhabina dangaa Itoophiyaa fi Suudaan jeduu jiruu isa sababa lafaa qootamu Al fashaqaa jadhamuun dhufe, jarsaa ta’uu fedhii akka qaban ibsaniru.
Dabalataanis Alarabiyaan Ingiliffaa oduu wa’ee Pireziidant Erdoogaan loola Tigraay akka dhaabatu jaarsa ta’uuf yaaluu isaani ibsu maxxanse.
Poostiin Fesbuukii Al jaziiraanis mata-duree “Erdoogaan loola Tigraay Itoophiyaa akka dhaabbatu jaarsa ta’uuf yalaan” jadhee bahe.
Fakkii: Barruu toora-intarneeticha irra jiru.
Hataa’u malee barruun toora-intarneeta irra jiru wa’ee Pireziidant Erdoogaan loola Tigraay Itoophiyaa akka dhaabatu jaarsa ta’uuf yaaluu isaani ibsu homaa hin jedhu. Barruun toora-intarneeta irra jiru mata-duree Fesbuukii irratti maxxanfameen wal hin fakkaatu. Mata-dureen baruu toora-intarneeticha irra jiruus “Erdoogaan lolli Tigraay Itoophiya nagayaan akka hikaamu deegare” jadha. Barruu keesas Erdoogaan “…loolli Tigraay Itoophiya godaansa kan kuma kudhanoota fi sodaa beelaa miliiyoonoota uume kana nagayaan akka hikaamu deegare.” Jedhuu isaani ibsame. Barruun Erdoogaan Turk waldhabina dangaa Itoophiyaa fi Suudaan jeduu jiruu jarsaa taate hiikuuf fedhii akka qabdu ibsu isaanis ni hima.
Fakkii: Associated Press
Possti Fesbuuki fi barruu toora-intarneticha jeduu wal-qunamtii kijibaa wan jiruuf HaqCheck poosti Fesbuukii kana MATA-DUREE DOGOGGORSISAA jadhee madaale.